အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သမိုင်း………. | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on June 29, 2013
Posted in: ဘင်္ဂလီအရေး.	1 Comment
……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ (Republic of Indonisia) သည်အရှေ့တောင်အာရှရှိ အီကွေတာမျဉ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ပါပူဝါနယူးဂီနီ နှင့်မြောက်ဖက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံတို့နှင့်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ချင်းဆက်စပ် လျှက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံအကျယ်အ၀န်းအနေဖြင့် (၇၃၅၂၆၈)စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ မြို့တော်ကတော့ ဂျာကတာဖြစ်ပြီး လူဦးရေအားဖြင့်(၁၉၉၉-ခုနှစ်စာရင်းအရ) ၅၀၇.၅.ရှိပြီး `ကမ္ဘာပေါ်တွင်မွတ်ဆလင်ဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
အာရှတိုက်၏အရှေ့တောင်ဘက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဆုမတြာနှင့် ဂျာဗားကျွန်းတို့တွင် AD,700-မှစတင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ထွန်းကားပြန့်ပွားခဲ့ပါတယ်။ သို့ရာတွင် ၁၄-ရာစုအရောက်တွင်မူ အစ္စလာမ်(မွတ်ဆလင်)များ တဖြည်းဖြည်းထိုးဖောက်လာပြီး ဗုဒ္ဓ၀ါဒီများ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှ(၁၀)နိုင်ငံတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကုန်မြေနှင့် ရေပိုင်နက်များပါ ထည့်တွက်မည်ဆိုပါက အကျယ်ဆုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်၏။ မွတ်ဆလင်တို့ မကျူးကျော်မှီက ထိုနိုင်ငံတော်ကြီးသည် ဗုဒ္ဓသာသာနာတော်စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့ပြီး အေးချမ်းမှုများစွာရှိခဲ့ပေသည်။
သာသနာတော်ဘယ်လောက်အထိ ထွန်းကားခဲ့သလဲဆိုရင် ကောင်ကင်ယံတခွင်တွင် ရဟန္တာတို့ ဈာန်ကြွခြင်းကြောင့် သင်္ကန်းရောင်တို့ ၀င်းလက်ပြောင်လင်းရွှေအဆင်းရှိပြီး မြေအပြင်သည်လည်း စပါးပင်တို့၏ ရွှေအိုရောင် ကောင်ကင်ယံတွင် ရဟန်းတော်များ၏ သင်္ကန်းရောင် ထိုရွှေဝါရောင်နှစ်ခု၏ အရောင်းအလင်းကား ရှုမညီးဖွယ်ရာကြည်ညို ပသာဒဖြစ်စေပြီး `သုဝဏ္ဏဒီပ´ရွှေရောင်ကျွန်းဟုပင်တင်စားခေါ်ဆိုခဲ့ရသည့် အထိ သာသနာတော်ထွန်းကား သာယာခဲ့၏။ ထို့သော် ယခုအချိန် ယခုအနေအထားနှင့်ကား လားလားမှမဆိုင် ရွှေရောင်အစား မွတ်ဆလင်တို့၏ အမည်းရောင်များသာ လွှမ်းမိုးအကျည်းတန်နေလေပြီ။ ထိုအင်ဒိုကျွန်း တနည်းဆိုရသော် သုဝဏ္ဏဒီပကျွန်းကဲ့သို့ တချိန်းတခါက သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ သင်္ကန်းရောင်ကြောင့် ရွှေရောင်လွှမ်းသာယာလှပကဲ့သော သီဟိုဠ်ကျွန်းသည်ကား ယခုအချိန်ထိ လှပဆဲ အေးချမ်းဆဲ သာယာဆဲပင်ဖြစ်၏။
မဇ္ဈိမဒေသ(အိန္ဒိယ)မှနေ၍ ဗုဒ္ဒသာသာနာတော်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀)ကပင် ရောက်ရှိပြန့်ပွားနေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဂျာဗာကျွန်းမှာ အင်ဒိုနီးရှာတနိုင်ငံလုံးသို့ ဗုဒ္ဓသာသာနာတော် ဖြန့်ချီရာ သာသာနပြု ဗဟိုဋ္ဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့၏။
AD.14,ရာစုအထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓသာသနတော် တည်ရှိနေသေးကြောင်းကို သမိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး နှင့် စာပေအထောက်အထားများအရ သိရှိရပါတယ်။ သာသနာတော်နှစ်(၉၅၈) AD-415, တွင် တရုတ်သမိုင်းပညာရှင် ဖာဟိယန်သည် အိန္ဒိယမှတဆင့် အင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ရှိနေသေးကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားပါတယ်။
တတိယသင်္ဂါယနာတင်အပြီး အရှင်မောဂ္ဂလိပုတ္တတဿမဟာထေရ်မှကိုးတိုင်းကိုးဋ္ဌာနသို့ သာသနာတော်ပြုစေလွှတ်ရာတွင် တခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော `သုဝဏ္ဏဘူမိ´ဒေသဆိုသည်မှာ အင်ဒိုနီးရှာသည် အဓိကနေရာတခုဖြစ်ကြောင်းကို ရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိများက တညီတညွတ် တည်းပြောဆိုကြပါတယ်။
သုဝဏ္ဏဘူမိံဂန္တွာန ၊ သောဏုတ္တရာ မဟိဒ္ဓိကာ။
ပိသာစေ နိဒ္ဓမေတွာန ၊ ဗြဟ္မဇာလမဒေသိယုန္တိ။
ဟူသော ပိဋကတော်ကိုထောက်ရှု၍ သုဝဏ္ဏဒီပခေါ် အင်ဒိုနီးရှားသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓသာသနတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားနေချိန်တွင် အစ္စလာမ်(မွတ်ဆလင်) ဘာသာမှာ မပေါ်သေးချေ၊ ထို့ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် စောစီးစွာ ရောက်ရှိနေပြီး ဖြစ်ကြောင်းမှာ ထင်ရှားပါတယ်။
သာသနာတော်နှစ်(၁၀၆)နှစ်၊ AD,520-တွင် ကသ္မီရဘုရင်၏ သားတော် အရှင်ဂုဏဓမ္မ သည် အင်ဒိုနီးရှား ဂျာဗားကျွန်းသို့ကြွရောက်၍ သာသနာတော်ပြုရာတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် စည်ပင်ပြန့်ပွားလာကြောင်းကို ကာအိုဆင်ချမ်ဟုဆိုသော တရုတ်ကျမ်းစာတစ်ခု၌ ဖော်ပြထား ပါသည်။ ထိုအခါက အိန္ဒိယ နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ကြီးမှ ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါလသည်လည်း အင်ဒိုနီးရှားသို့ သာသနာပြုကြွရောက်ခဲ့ကြောင်းကို မှတ်တမ်းများအရသိရပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် `ဗောရောဗုဓ´စေတီတော်ကြီးနှင့် `ကလဆံ´စေတီ၊`မင်ဒတ်စေတီတော်´ တို့မှာ အင်ဒိုနီးရှာတွင် ယခုအချိန်အထိ ထင်ရှားစွာတည်ရှိနေပါသည်။သာသနာတော်နှစ် (၁၃၃၃)ခုနှစ် AD-790,တွင်ရေးထိုးထားသော ကျောက်စာများနှင့်၊ယိကျင်၏ မှတ်တမ်းအရ ထိုခေတ်အခါက အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းကို သုဝဏ္ဏဒီပ(ရွှေရောင်ကျွန်း)ဟုခေါ်ဆိုပြီး နိုင်ငံ တော် ၏အမည်ကိုလည်း `သီရိဝိဇယ နိုင်ငံတော်´ဟုခေါ်ဆိုကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
သာသာနာတော်နှစ်(၁၆၀၀) AD,1157 တွင် အင်ဒိုနီးရှား(သုဝဏ္ဏဒီပ)သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပညာသင်ကြားရာ ဗဟိုချက်မနေရာဖြစ်လာခဲ့သည်၊၀ိက္ကမသီလတက္ကသိုလ်ကြီး၏ ပါမောက္ခချုပ်ကြီး အတိဆာ(ဒီပင်္ကရဉာဏ)သည်ပင် အင်ဒိုနီးရှားမှ ဆရာတော် စန္ဒြကိတ္တိထံတွင် ပညာများဆည်းပူး ခဲ့ရလေ၏။ ဆရာတော်အတိဆာသည် တိဗက်၏ သာသနာပြုအကျော်အမော် ဆရာတော် ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုခေတ်အခါက အင်ဒိုနီးရှား(သုဝဏ္ဏဒီပ)ဘုရင် သေလိန္ဒြမင်းတို့သည် မလေးကျွန်းဆွယ် အထိ အာဏာပြန့်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ပြန်ပွားစေရန် သာသနာပြုတော်မူခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကျော် ဗောရောဗုဓစေတီတော်ကြီးကိုလည်း ထိုသေလိန္ဒြမင်းဆက်များက တည်းထားတော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှ စောဠမင်းများနှင့် ဘင်္ဂေါမှ ပါလမင်းတို့သည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ပြန့်ပွားစေရန် လှုဒါန်းထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြသည်။ သေလိန္ဒြ နာလန္ဒ တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် သံဃာတော်များအတွက် ကျောင်းဆောင်များကိုဆောက်လုပ်လှုဒါန်းပြီး ထိုကျောင်းများကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ပါလမင်းများနှင့် စောဠမင်းများက ကျေးရွာများကို လှုဒါန်းခဲ့ကြလေ၏။
“သာသနာတော်နှစ်(၂၀၀၀) AD-1457,တွငအာရပ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင် တို့သည် သင်္ဘောများဖြင့် ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်ဟုဆိုကာ မလေးကျွန်းဆွယ် မလက္ကာရေ လယ်ကြားသို့ ရောက်ရှိနေထိုင်ကြပြီး အာရပ်မွတ်ဆလင်တို့သည် ၄င်းတို့၏ နည်းဗျူဟာဖြစ်သော-
၅။ ဘာသာကိုယူ တိုင်ပြည်ကိုသိမ်းမည်။
ဟုဆိုသော ၀ါဒအတိုင်း ငွေကိုရှာ၍ ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့အား မွတ်ဆလင်တယောက်လျှင် မယားများ စွာယူ၍ မွတ်ဆလင်လူဦးရေများရန် ပြုလုပ်ပြီး နောက် စီးပွားရေး၊လူအင်အား၊ စသည့်တို့ကို အသုံချ၍ အာဏာကိုရအောင်သိမ်းလိုက်ကြပြီး သူတို့၏ လုပ်နည်းထုံးစံအတိုင်း အာဏာရပြီးနောက်တွင် တစ်ပြည်လုံးကို မွတ်ဆလင်ဇာတ်သွင်းလိုက်ကြတော့၏။
ထိုအချိန်မှစ၍ အင်ဒိုနီးရှားခေါ် သုဝဏ္ဏဒီပမှနေ၍ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားတော့ပါတယ်။ “မွတ်ဆလင်တို့ သာသနာပြုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကဲ့သို့ တရား နည်းလမ်းကျနစွာ အကျင့်၊အယူတရား ၀ါဒကို ဟောပြကာစည်းရုံးခြင်းမဟုတ်ပေ၊ ဟောပြော ရအောင်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် မည်သည့်ကျင့်စဉ်အကျင့်စရဏမျှမရှိပေ။ထို့ကြောင့် အောက်တန်းကျစွာ မွတ်ဆလင်ဦးရေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် စစ်မှန်သောဘာသာတရားဟုတ်လောက်၏ မဟုတ်လောက်၏ ဆိုသည်ကို အနည်းငယ် ဝေဖန်ပိုင်းခြားသော အသိဉာဏ်ရှိသူတိုင်း ပြေးမကြည့်ရပဲ တွေးကြည့်ယုံမျှဖြင့် သိနိုင်ပါပေ၏။. . . . . . . . . . . . . . . . . .
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် မွတ်ဆလင်တို့၏ ၀ါးမျိုမှုကြောင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်သွားသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သော ပါဠိ၊သက္ကတ ဘာသာစကားများကိုကား သုံးစွဲနေဆဲပင် ဖြစ် ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လေကြောင်းကုမ္မဏီတစ်ခု၏ နာမည်ကို ပါဠိဘာသာဖြင့် မှည့် ခေါ် ထားပါတယ်။ ထိုလေကြောင်းလိုင်း၏ အမည်မှာပါဠိလို`ဂရုဍ´ (ဂဠုန်)ဟုဖြစ်၏။
ထို့အပြင် အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ`ဆူကာနို´၏အမည်မှာလည်း ပါဠိအသံထွက်ဖြင့် `သုကဏ္ဏ ´ဟုဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သု-လှပသော၊ကဏ္ဏ-နား၊ဟုအဓိပ္ပါယ်ရ၏။ ယခုအချိန်အထိ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုးများကို မသိအောင်ကျောကုန်းကို အမှတ်တမဲ့ထုလိုက်ပါက လန့်ဖျတ်ပြီး “ဗုဒ်-ဗုဒ်၊ ဗုဒ္ဓ-ဗုဒ္ဓ ဟုယောင်ယမ်းမည်တမ်းလေ့ရှိနေဆဲပင် မြန်မာလို`ဘုရား-ဘုရား-ဟုယောင်ယမ်း ခြင်းနှင့် အတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
မွတ်ဆလင်တို့သည် ဗုဒ္ဒသာသနာ့အထောက်အထားများအား အခွင့်ရလျှင်ရသလို ဖျက်ဆီး လေ့ရှိတာကြောင့် စာပေအထောက်အထားများမှာ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့ရပြီး။ ကမ္ဘာကျော် ဗောရောဗုဓ အစရှိသော သာသနိကအဆောက်အဦးများအားလည်းဖျက်ဆီးလေ့ရှိတာကြောင့် နိုင်ငံတကာမှ အကာအကွယ်ပေးထားရသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
တရုတ်ပညာရှင်ခရီးသည် အီဆိုင်(I-TSING) ၏မှတ်တမ်းအရ သီရိဝိဇယ (SRIVIJAYA) မင်းအုပ်ချုပ်နေချိန်တွင်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထွန်လင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရပေသည်။AD-800, 900,စု ဆိုင်ရာဒရာ(SAILENDA)မင်းများလက်ထက်တွင်မူ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် အထွန်းကား ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ မလေးကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးနှင့် ဆုမတြာ၊ဂျာဗား၊ဘာလီ၊ဘော်နီယို ကျွန်းအား လုံးအထိ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဗောရောဗုဓစေတီတော်ကြီးသည် အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းသော ကမ္ဘာကျော်အဆောက်အဦးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အာရှတခွင်တွင်တုမမှီသော အဆောက်အဦးတခုပင်ဖြစ်၏။ ယင်းဗောရော ဗုဓစေတီတော်မြတ်ကြီးကို AD,800 တွင် တည်းထာတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါဠိစာပေမှတ်တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့သည် တတိယသင်္ဂါယနာ တင်ပြီး BC.300 ခန့်မှစတင်၍ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို မရှေးမနှောင်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြ ကြောင်းသိရပေသည်။ ပထ၀ီအနေအထားအရ မြန်မာနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့သည် သာသနာ့ သမိုင်းစဉ်အရ နီးစပ်မှုများရှိခဲ့ပြီး ညီရင်းအကိုသဖွယ် နှစ်ပြည်ထောင်တို့သည် သာသနာတော် ဆိုင်ရာများကိုအတူတကွလက်တွဲခဲ့ကြပါသည်။သို့သော် ယခုအချိန်မှာတော့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်း လောက်အောင် လုံးဝခြားနားသွားခဲ့ပြီဖြစ်၏။
ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အင်ဒိုနီးရှားသာသနာပြု မှတ်တမ်း များအရဆိုရသော် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ဂျာကာတာမြို့မှ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ မစ္စတာဘွန်အန် ဆိုသူ သည် ရန်ကုန်မြို့ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာသို့ (၁၇.၁.၅၃)နေ့တွင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်ကိုသိမြင်နားလည်ပြီး မည်သူမှမတိုက်တွန်းရပဲ သဒ္ဓါတရားထက်သန်ကာ မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ကမ္မ၀ါစာဆရာတော်များအဖြစ် မင်းကွန်းတိပိဋက ဆရာတော် ၊သီဟိုဠ်ဆရာတော် အရှင်အာနန္ဒာမေတ္တယျ(အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)နှင့် ဆရာတော်အ ရှင် ဉာဏုတ္တရ (အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)မှ မစ္စတာဘွန်အန်အား မြင့်မြတ်သောရဟန်းအဖြစ်သို့ ကံဆောင် ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုအင်ဒိုနီးရှား ရဟန်းတော်၏ ဘွဲ့တော်ကို `အရှင်ဇိနရက္ခိတ´ဟု ဘွဲ့အမည် ပေးတော်မူခဲ့ကြပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားရဟန်းတော် အရှင်ဇိနရက္ခိတသည် မိမိ၏မွေးရပ်မြေတွင် စစ်မှန်သော ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်ကို ပြန်လည်၍ မျိုးစေ့ချရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဇာတိမြေအင်ဒိုနီးရှားသို့ ပြန်လည်ကြွ တော်မူခဲ့၏။သို့ရာတွင် အရှင်ဇိနရက္ခတသည် အမိမြေသို့ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရန်လုပ်ဆောင် ဘို့နေနေသာသာ တစ်ရက်တာမျှပင်တည်းခိုနေထိုင်ခွင့်ကို မွတ်ဆလင်တို့က မပေးတာကြောင့် စကာင်္ပူ ရှိ သီရိလင်္ကာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ကြွရောက်သီတင်းသုံး ရရှာလေ၏။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတို့တွင် သူတပါးနိုင်ငံများတွင် ၄င်းတို့ပြုလုပ်နေကျအတိုင်း အသံချဲ့စက် ဖြင့် အသံကုန်ဟစ်အော်ခြင်း၊ နွား၊ဆိတ်တို့အား ရက်စက်စွာခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်း စသည်များ ပြုလုပ် နေကြပါသော်လည်း သူတို့နိုင်ငံတွင်မူ အေးငြိမ်းလှသော တရားတော်ကိုတောင် ဟောပြခွင့် မေတ္တာပို့သခွင့်အသာထား သူနိုင်ငံသားကိုပင် တည်ခိုးနေထိုင်ခွင့်မရနိုင်ရှာပေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ပြောင်းသွားလို့ဆိုပြီး သတ်မပစ်တာကိုပင် ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရမလိုပင်။
ယနေ့ဆိုလျှင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်ဆလင် အများဆုံးနိုင်ငံတခုဖြစ်လို့ပင်နေပါသည်။၁၉၈၇-ခုနှစ် မှတ်တမ်းများအရ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ(၈၀)ရာခိုင်နှုန်းမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်ဆလင်များဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဦးရေ (၉)ရာ ခိုင်နှုန်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များမှာ(၃)ရာခိုင်နှုန်းမျှ သာရှိကြောင်း သိရပါသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင်မူကား ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များမှာ (၁)ရာခိုင်နှုန်းပင် မရှိတော့ပဲ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာမျိုးကလည်း သံဃာတော်များ၏ အဆုံးအမတရားတော်ကို ရရှိမှသာ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ အင်ဒိုနိုင်ငံသည် တပါးနိုင်ငံသားရဟန်းတော်များအား ကျောင်းထိုင် တရားဟောပြုခွင့်ပေးဘို့နေနေသာသာ သူ့နိုင်ငံသားသံဃာတောင် အ၀င်မခံပေ ၊မွတ်ဆလင်တို့ပြောပြောနေသည့်`ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်´ဆိုသည်နှင့် “ဘာသာရေးပဋိပက္ခ မဖြစ်စေရ၊ ဘာသာလူမျိုး မခွဲခြား မြန်မာနိုင်ငံသား” ဆိုသည် ကို ပျက်ရယ်ပြုနေ သလိုပင်။ ခုနောက်ပိုင်းတွင်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ၊စေတီတော်များတည်ထားခွင့်ပြုလာကြ၏။ သို့သော် အကောင်းသဒ္ဓါတရားဖြင့် ခွင့်ပြုခြင်းမဟုတ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လွန်စွာပေါများ သည့် အင်ဒိုတွင်ဗုဒ္ဓရပ်ပွားတော် စေတီတော်များရှိနေသည့် နေရာများတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် မကျရောက်ခြင်းကြောင့် အကာအကွယ်သဘောဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်၏။ စေတီတော် ရုပ်ပွားတော်များသာရှိပြီး ကိုးကွယ်ပူဇော်သူမရှိသောအခြေအနေကားဝမ်းနည်းစရာပင်။ အကောင်းဘက်ကတွေးဖြေသိမ့်မည်ဆိုပါက အနှစ်သာရသာသနာတော် ကွယ်ပပြီးဖြစ် သော်လည်း အသွင်သဏ္ဍာန်အနေဖြင့် ရှိနေသည်ကိုပင် ကျေနပ်ဖြေသိမ့်ရမလိုပင်ဖြစ်၏။
သာသနာနှစ်၁၂-ရာစု AD,600.ကျော်တွင်ဆုမတြားကျွန်းတောင်ဘက်ဒေသ၊ ပလင်ဘန်းမြို့တွင် ထီးနန်းစိုးစံခဲ့သည့် သီရိဝိဇယမင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို အကြီးအကျယ် ထောက်ပံ့ခဲ့သော သာသနာပြုမင်းတပါးဖြစ်သည်။၄င်းဘုရင်၏လက်ထက်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ တော်သည် တရုတ်ပြည်အထိပင် ပြန့်ပွားအောင်သာသနာပြုနိုင်ခဲ့၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကြီးများကိုတည်ထောင်တော်မူခဲ့ပြီး ထိုအထဲတွင် သီရိဝိဇယဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးသည် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး ပါဠိ၊သက္ကတကျမ်းဂန်တို့အား ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လာရောက်ပ ညာဆည်း ပူးခဲ့ရ၏။ကမ္ဘာကျော် ဗောရောဗုဓတော်တီတော်ကြီးကိုလည်း ထိုရာစုနှစ်အတွင်း၌ တည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သာသနာတော်နှစ်(၁၃၀၀) AD-700,ကျော်တွင် ဆုမတြာဘုရင် သီရိဗလ ပုတ္တဒေ၀ မင်း ကြီးသည် မိမိပိုင်ဆုမတြာကျွန်းမှ ရွာငါးရွာနှင့် ရာဇဂြိုလ်ပြည် ဂယာစီရင်စု မှရွာငါးရွာတို့ကိုလဲလှယ် ကာ နာလန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးအတွက် ပညာရေးပဒေသာပင်စိုက်ထူခဲ့သည့်အထိ သာသနာတော်ကိုအင်ဒိုသားတို့သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို ကြည်ညိုလေးစားခဲ့ကြသည်။
၁၂-ရာစုတွင် အာရေဗျနိုင်ငံ၊ ပါရှားနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယကမ်းခြေတလျှောက်မှ မွတ်ဆလင် နိုင် ငံ များမှ ကုန်ုသည်ရောင်ဆောင် နယ်ချဲ့ဘာသာရေးမျက်ကန်းအစ္စလာမ်ဝါဒီမွတ်ဆလင်တို့သည် အင် ဒို ကျွန်းဆွယ်များသို့ရောက်ရှိလာကြပြီး ၄င်းတို့မူဝါဒအတိုင်း အိမ်ရှင်တို့၏ ဘာသာ သာသနာနှင့် လူမျိုး တို့ အား အောက်တန်းကျသောနည်းလမ်းများဖြင့်ဝါးမျိုခဲ့ကြလေ၏။ နောက်ဆုံးတွင် `မိုဂျိုပလစ် ´ခေါ် `ဂျာဗာ´မြို့တော်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး ကျွန်းအားလုံးကို မွတ်ဆလင်များမှ အာဏာရရှိအောင် ပြုလုပ်ပြီး အုပ်ချုပ်လိုက်ကြသည်။
မိုဂျိုပလစ်နိုင်ငံ၏ဘုရင်သည် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့မ၀င်လိုသောကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခဲ့ရှာလေ၏။ မိမိ၏အသက်ထက်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုပို၍ ချစ်သော ဘုရင်ကြီး ပါပေတကား။ထိုမိုဂျိုပလစ်ဘုရင်၏သားတော်သည်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုလက်ခံခြင်း မပြုနိုင်၍ အစ္စလာမ်ဘာသာအတွင်းသို့မ၀င်လိုကြသည့် သံဃာတော်များ၊ ပညာရှိများ၊ ပြည်သူကိုခေါ်ဆောင်ကာ ဘာလီကျွန်းသို့ထွက်ပြေးပြီး ထိုကျွန်းပေါ်တွင် အခြေချ နေထိုင် ကြသည့်အတွက် ယနေတိုင်ဘာလီကျွန်းဝယ် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏ အရိပ်အငွေ့များ ကျန်ရစ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့လျှင် အင်ဒိုနီးရှားကျွန်စွယ်တခုလုံးတွင် မွတ်ဆလင်တို့၏ ၀ါမျိုအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးသည် ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရလေ၏။ရှေ့သာသနာ့ဥသျှောင် ဆရာတော်များ ၊ရည်ရွယ် ချက်ကြီးမားစွာဖြင့်ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်မျိုးစေ့ချ သာသနာပြုခဲ့ရာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသည် အခုအချိန်တွင်မှာတော့ နှောင်းခေတ်လူသားများ၏ မသိလိုက်မသိဖာသာ ကြောင့်ကြမဲ့မှု၊ တာဝန်မကျေပွန်မှုများကြောင့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရသည်။ “အယူဝါဒ ဘာသာတရာမည်မျှပင် ကောင်းမွန်မှန်ကန်ပါသော်လည်း စောင့်ထိန်းသူ ကာကွယ်သူများ ညံ့ဖျင်းပါက လျှင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်တတ်ပါတယ်” ဆိုတာ သာဓကယူသင့်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အမိမြန်မာပြည်မှ သာကီနွယ်ဘွားမြန်ပြည်သားတို့အနေဖြင့် တချိန်တခါက ဗုဒ္ဓသာ သနာတော် နေရောင်၊လရောင်ပမာထွန်းလင်းခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီး ကိုခြိမ်းခြောက် ဆုံး သော အန္တရာယ်အပြုဆုံးသော နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အီရတ်၊အီရန်၊အာဂနစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ တာကစ္စတန်၊ ဥဇဘက္ကစ္စတန်၊ ဂေါ်ဒန်၊ဆီးဒီယားတို့ကဲ့သို့မဖြစ်စေရန် ကမ္ဘာ့ကပေးသော မွတ်ဆလင် အန္တရာယ်သင်္ခန်းစာကိုအရယူကာ ဆရာ၊ဒကာလက်တွဲကာဖြင့် အမျိုးဘာသာ၊သာသနာတော်ကို ကာကွယ်ကြပါစို့။
ကမ္ဘာကပေးနေသော များပြားလှသော ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ မွတ်ဆလင်အန္တရာယ် သင်္ခန်းစာကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ မိမိတို့ထက်မိုက်သော၊ မိမိတို့ထက်ညံ့သော၊ မိမိတို့ ထက်တာဝန်မကျေသော၊ မိမိတို့ထက် သမိုင်း၏တရားခံဆိုးများရှိတော့မည်မဟုတ်ေ ကြာင်း ပြောကြားရင် နိဂုံးချုပ်လိုက်ရပါတော့သတည်း။
(အမျိုးသားရေးသတိ၊ ဘာသာသာသနာရေးသတိ ၊ကိုယ်စီရှိနိုင်ကြပါစေဟုဆန္ဒပြုလျှက်)
← ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာမိန်းခလေးများအတွက် မမှားသင့်တာလေးတွေ မမှားရအောင်
OIC လည်း မအူတော့ပါ →
One comment on “အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သမိုင်း……….”
myomyanmar on September 29, 2013 at 6:35 pm said:
Reblogged this on မျိုးမြန်မာ.